Zimbaweans in South Africa only temporarily, says Mujuru | The Citizen Search
17.9.2016 07:13 pm
Zimbaweans in South Africa only temporarily, says Mujuru	ANA	Zmbabwe People First leader Joice Mujuru addressing Zimbaweans in S.A Pretoria	‘I want to thank them so much for the efforts they are giving for Zimbabweans. I know it’s very difficult to look after our young children of this magnitude’	Zimbabweans living in South Africa and numerous other countries should always remember that the current phase will pass, former Zimbabwe vice-president and now Zimbabwe People First leader Joice Mujuru said on Saturday.
Regarding the atrocities of Gukurahundi, which left more than 20,000 people dead in Matebeleland when she was in the Zanu PF administration, Mujuru said she was now reaching out to the affected communities.
Zimbabwe’s Gukurahundi massacres saw up to 20,000 villagers and opponents of then prime minisater Robert Mugabe killed in the mid-1980s and remains a salient, thorny, and highly controversial political hot potato in Zimbabwe.
Zimbabweans come to SA to steal, says magistrate	25.8.2016	Zanu-PF fired me for fighting corruption – Mujuru	25.6.2016	Home affairs ‘secretly deporting Zimbabweans, Malawians’	21.6.2016	what's hot